Igama leSpain elithi Figueroa ligama lokuhlala kwinqanaba elithile laseGalicia, eSpain, elibizwa ngokuba yiFieroa, ukusuka kwisiqhamo se figueira , esithetha "umkhiwane."
I-Figueroa ngowona- 59 isiqhelo seSpanish .
Igama legama elithile Igama: I- FIGUERO, iFIGUERA, i-FIGAROLA, i-HIGUERAS, i-HIGUERO, i-HIGUEROA, i-FIGUEROA, i-FIGUERES
Igama Lokuqala: iSpanish
Kuphi abantu abanegama elibizwa ngokuba nguFIGUEROA Igama?
Ngoxa ipeyinti ye Figueroa yavela eGalicia kufuphi nomda weSpain kunye nePortugal, ngokubhekiselele kwi-Forebears ayisasaye kuloo ndawo njengokuba kunjalo nakwamanye amazwe amaninzi aseSpeyin.
I-Figueroa igama lokugqibela eli-18 e-Puerto Rico, e-38 e-Chile, e-47 eGuatemala, e-56 e-El Salvador, e-64 e-Argentina, e-68 e-Honduras, e-99 eVenezuela, e-105 e-Peru nase-111 eMexico. Ngaphandle kweSpain, iFiuuero isasetyenziswa kakhulu eGalicia, ngokwe-WorldNames PublicProfiler. EUnited States, isibongo se Figueroa sitholakala kwinani elikhulu kumazwe aseFlorida, eTexas, eCalifornia, eArizona, eNew Mexico naseNew York.
Abantu abaPhezulu abanegama leFIGUEROA
UFrancisco de Figueroa - umbhali waseSpain wenkulungwane ye-16
Pedro José Figueroa - umdwebi waseColombia
Cole Figueroa - MLB 2nd baseman kwiPirates yasePittsburgh
- Umshendi weVenezuela
U Pedro de Castro y Figueroa - umdlali waseSpain waseNew Spain
UJosé Figueroa Alcorta - uMongameli we-Argentina, 1906-1910
UFrancisco Acuña de Figueroa - imbongi kunye nomlobi wase-Uruguay
UFernando Figueroa - uMongameli wase-El Salvador, 1907-1911
Izibonelelo zoGenesalogy for the Name FIGUEROA
Ama-100 amaninzi amagama aqhelekileyo aseSpain
Ngaba uye wakha wazibuza ngegama lakho lokugqibela laseSpanish kwaye liba njani?
Eli nqaku lichaza iindlela eziqhelekileyo zokubiza amagama aseSpeyin, kwaye ihlola intsingiselo kunye nemvelaphi yegama elingu-100 eliqhelekileyo leSpeyin.
I-Figueroa Crest Family - Akusikho Oko Ucingayo
Ngokuchasene noko ungayiva, akukho nto injenge-figueroa intsapho okanye isambatho seengalo kwifayile ye Figueroa. Iingubo zeengalo zinikwe abantu ngabanye, kungekhona iintsapho, kwaye zingasetyenziselwa ukusetyenziswa kuphela ngabantu abangenakuphazanyiswa inzala yomntu oye wanikwa ingubo yeengalo.
Iprojekthi ye-Figueroa DNA Igama
Iprojekthi yeNtsapho yaseFilueroa ifuna ukufumana ilifa elifanayo ngokukwabelana ngolwazi kunye nokuhlolwa kwe-DNA. Naluphi na ukuchaneka okutshintshileyo lwefayile yeFiwuuero bamukelekile ukuba bathathe inxaxheba.
I-FIGUEROA Family Genealogy Forum
Ibhodi lemiyalezo yamahhala igxile kwiinzala zikaFeluero okhokho emhlabeni wonke. Khangela imibuzo esedlule, okanye uthumele umbuzo wakho.
I-FamilySearch - I-FIGUEROA Genealogy
Ukufikelela kwiiirekhodi zeengxelo zamahhala ezingaphezulu kwezigidi ezi-1.2 kunye nemithi yentsapho edibeneyo yomgca othunyelwe kwi-Figueroa nomnxeba wezahlulo kwiwebhusayithi ye-genealogy ebanjwe yiCawa likaYesu Kristu we-Saints-Day Saints.
Igama legama leFIGUEROA
Olu luhlu lokuthumela ngokukhululekileyo lwabaphandi befayile yeFiuuero kunye nokutshintsha kwalo kubandakanya iinkcukacha zokubhaliselwa kunye neengxelo ezigcinwe ngophawu lwemiyalezo edlulileyo. Ejongene neRootsWeb.
DistantCousin.com - Imbali YesiGalokelo & Yentsapho yeFIGUEROA
Hlola ii-database zolwazi zamahhala kunye neefayile zodidi lwegama lokugqibela igama elithi Figueroa.
I-Figueroa Genealogy and Family Tree Page
Dlulisa amehlo kwimithi yentsapho kunye neenxulumano kwiirekhodi zomthonyama kunye neembali zabantu ngabanye abanegama lokugqibela elithi Figueroa kwi-website ye-Genealogy Today.
I-Reaney, PH Inkcazelo yegama lesiNgesi.
I-Oxford University Press, ngo-1997.
Ngaba Igama LamaYuda?
I-RUSSELL Igama lomnqophiso kunye neNtsapho yeMbali
BELL - Igama lomnqophiso kunye neMbali Yentsapho
VASQUEZ Igama lomnini igama kunye nomthombo
Iimpawu eziphambili ze-GMAT ze-2016
Ukungafani okuqhelekileyo okukhoyo
Thixo bamaGrike aseMandulo
I-Botany yeSityalo seTuba
Inkcazo kunye nemizekelo yeeLwimi
Amazwe angama-10 aphesheya komhlaba
Indlela yokudweba iWolf kwiPencil Color
Izifundo eziMfutshane zokuPhucula ixesha lokuphumula
Izinto eziphambili ze-Cheerleading Competition Routine: Icandelo 1
Ngaba i-FAFSA kwiSikolo seGreydesi?
Ixesha lokusebenzisa iSigqeba ngeLiFrentshi elithi 'Coire'
Iinqwelo zokuPasa kwihlabathi
Iingcebiso ezili-10 zokususa iintlobo zeeFlies
IKrismesi: Oko Senzayo, Indlela Esiyisebenzisa ngayo, Nokuba Kutheni Imicimbi
Izinto ezi-9 zokumazi nge-Gymnast Shannon Miller
Yiyiphi Intlupheko Enkulu?
I-10 Eyona nto ibaluleke kakhulu kwiDinosaur Facts
UJohnny Cash: Iminyaka Yokuqala kunye noMkhosi Womoya
Imbali yobuGcisa Inkcazo: I-Painting Action